အလုပ် မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် စာရေး အလုပ်အကိုင်များ
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 4
အလုပ် 48 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Recruiter active 34 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
ဟင်္သာတ | ဧရာဝတီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း
- site တွင်လာရောက်၍ ငွေသားစုဆောင်းပေးရမည် - မန်နေဂျာထံသို့နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာတင်ပြရမည် - ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပါ။ - ဒဏ်ကြေးနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်ရိုးမဘဏ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ - SOP အတိုင်းသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမည်
- စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်ရမည် (Myan,Eng) - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး စကားပြောချိုသာယဉ်ကျေးသူ - လစာ ညှိနှိုင်း
Boduo Hakata Co.,Ltd
Prepare proposal manual conjunction with the guideline of supervisor and submit to related departments. Copying and Printing of the Operation Department’s documents. Collection Data from the main source and data entry. Report toOperation Manager (Weekly) Service (serve juice, negotiate with customers)
- China Spare Parts တွင် အပိုပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ၀ယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ - ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကို ထိန်းထားခြင်းဖြင့် အရောင်းပမာဏနှင့်အရောင်းစျေးနှုန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရမည်။
- စုဆောင်းထားသောငွေစာရင်းများနှင့်တာဝန်ယူထားသောရက်လွန်နေသောအကောင့်များသို့ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမည် - သက်ဆိုင်ရာ HP အခြေအနေများတွင်စုဆောင်းမှုရလဒ်များအပေါ်မန်နေဂျာထံအစီရင်ခံပါ။ စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌မန်နေဂျာနှင့်အခြား FCO တို့အားထောက်ပံ့ပေးမည်။ - အတိုးနှင့်မူရင်းနှစ်ရပ်စလုံးကို ပေးချေရမည့်အချိန်နှင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အရစ်ကျငွေပေးချေမှုတွင် အတိုးနှင့်မူရင်းများ မပေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိ အကောင့်အားလုံးကို ကျော်လွန်ပြသသည့် အကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်တိုင် နေ့စဉ် ကွန်ပျူတာမှထုတ်ပေးသည့် အစီရင်ခံစာများကို အသုံးပြုနိုင်ရမည် - ငွေမသွင်းသောအကောင့်များကို သိရှိနိုင်ရန်ထိရောက်စွာ နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ပါ။ - မန်နေဂျာက သင့်အား အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်နိုင်သော အခြားတာဝန်များ သို့မဟုတ် အထူးပရောဂျက်တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည် - ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး သဘောတူညီမှုရယူရန်နှင့် SOP မှဖောက်သည်များနှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းနည်းကို အကြံပြုရန် ခရီးသွားနိုင်ရမည် - အခြေအနေများကို ရှင်းပြနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက ပြန်လည်သိမ်းယူရန် ကောင်းစွာနားလည်နိုင်ရမည်။
- ဝန်ထမ်းများ၏ နေ့စဥ် ရုံးတက်/ဆင်း မှတ်တမ်းများနှင့် ခွင့်ကိစ္စများ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန် - ဌာနအတွင်း/အပြင် ဝင်စာ/ထွက်စာများ စီမံဆောင်ရွက်ရန် - ဌာနတွင်းသုံး အသေးသုံးစရိတ်များနှင့် ပက်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန် - အထက်အရာရှိနှင့် တွဲဖက်၍ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်
Maintain to quotation and tender management policies and practices in performing daily tasks. Perform tender process and documents contact controls. Follows up the tender opening at the construction project. Demonstrate understanding and knowledge of government procurement regulations. Responsible for the contract Sign with the clients. Keep Pricing and other confidential information. Prepare Tender Quotation and Tender Report. Participates in the tender meeting.
အကျိုးအမြတ်: •	Travel Allowance •	Overtime Payment •	Uniform
(Business Service စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အစိုးရဌာနများသို ကျွမ်းကျင်စွာဝင်/ထွက် သွားလာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
🔹အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုရန် ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ 🔹Director နှင့် Department Head များထံသို့စာများဖြန့်ဝေခြင်း။ 🔹Email စစ်ဆေးခြင်း၊ မှတ်တမ်းပြုလုပ်ခြင်း၊ Report ပေးခြင်း။ 🔹လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြသခြင်းနှင့် Report စစ်ဆေးခြင်း။ 🔹အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်သော File များထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း။ 🔹ဖုန်းများခေါ်ဆို ဖြေကြားခြင်း နှင့် ဈေးနှုန်းလေ့လာစုံစမ်းခြင်း။ 🔹ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပေးခြင်း။ 🔹Supervisor များအား သင်ကြားပြသခြင်း။
Office Staff (Claim Survey)
အကြီးတန်း နှင့် လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ သတင်းပို့ပါ။ တိုင်ကြားမှုအမှုကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပြင်ပသို့ စစ်ဆေးသွားရန် 24 နာရီ တောင်းဆိုမှု တာဝန် စာရွက်စာတမ်းများ ၊ မတော်တဆမှု ၊ ပြီးပြည့်စုံသော case ဖိုင်များအတွက် ဓာတ်ပုံများကို ပြုပြင်ရန္။ လိုအပ်သောဘောက်ချာများနှင့် ဓာတ်ပုံများအတွက် တရားဝင်အလုပ်ရုံ၊ အခြားအလုပ်ရုံနှင့် ဖောက်သည်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရန္။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဓာတ်ပုံများ၊ ကားပြုပြင်ရေးဓာတ်ပုံနှင့် ဘောက်ချာများကို အကြီးတန်းဝန်ထမ်းများထံ ပေးပို့ရန္။
Recruiter active 28 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
အဆောင်နေနိုင်ရပါမည်။ အလုပ်ချိန် မနကျ(၉း၀၀)~ည(၉း၀၀)နာရီ ည(၉း၀၀)~မနကျ(၉း၀၀)နာရီထိ တပတ်(၁)ရက်ပိတ်ပါသည်။ ယနီဖောင်းပေးပါမည်။
ပစ္စည်းအဝင်ထွက်စာရင်းများပိုင်နိုင်ရမည််။ ပစ္စည်းများကို မပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ order များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Target ပြည့်မီပါက Bonus ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ အချိန်ပိုကြေး တခြားခံစားခွင့်များ အလုပ်ချိန်- ၈:၃၀ နာရီမှ ၅:၃၀နာရီ ပိတ်ရက်-Sunday and Gazette day
Service နဲ့ပတ်သက်သောပစ္စည်းများ Order မှာခြင်း၊ Tools များစစ်ဆေးခြင်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ Customer Complaint များ လျှင်မြန်စွာပြီးစီးအောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ Service Team များမှ အပ်နှံသောငွေကြေးများကို လက်ခံရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Target ပြည့်မီပါက Bonus ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ အချိန်ပိုကြေး တခြားခံစားခွင့်များ အလုပ်ချိန်- ၉:၀၀ နာရီမှ ၅:၃၀နာရီ ပိတ်ရက်-တစ်ပတ် တရက်
• Microsoft Office (Word/Excel/Photoshop), Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အစိုးရရုံးနှင့် Admin Field အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ • Communication Skill, Presentation Skill & Leadership Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ • မြောက်ဒဂုံအနီး နေထိုင်သူကို ဦးစားပေးပါမည်။
- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲ၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ - အဖွဲ့အစည်း၏ သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုများကို သေချာစေရန် စီမံခန့်ခွဲသူ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ရောင်းချသူများနှင့် အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်ပါ။ - လည်ပတ်မှုမန်နေဂျာအတွက် အပတ်စဉ် အစီရင်ခံစာ၊ လစဉ်အစီရင်ခံစာ ပြုလုပ်ရန်။ - Event Management နှင့် Customer များနှင့် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပါ။ - ဒေတာဝင်ရောက်မှု၊ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိမှုတို့ကို ကူညီပေးသည်။
Recruiter active4mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.